पैसाको मोह कसैलाई पुरा हुँदैन। कमाउने रहरपनि सबैमा हुन्छ। धेरैले वैध तरिकाबाटै धेरै भन्दा धेरै पैसा कमाउने सोच राख्छन्। कोही सफल हुन्छन् भने कोही असफल हुन्छन्। अब कसरी कमाउने त पैसा ? तपाइँ खालि समयमा यत्तिकै समय बर्बाद गरेर बस्नु भन्दा आज हामी सुत्र दिँदैछौ। फेसबुकले आफ्नो प्रयोगकर्तालाई पैसा कमाउने प्लेटफर्म पनि दिएको छ।
हामी फेसबुकलाई आफ्नो कुरा सेयर गर्न र म्यासेज गर्न मात्र प्रयोग गरिरहेका छौं तर जान्यो भने फेसबुक बाट राम्रा पैसा कमाउन पनि सकिन्छ। के तपाइलाई थाहा छ ? इनटरनेट मार्फत फेसबुक प्रयोगकर्ताले चाहेमा घरमै बसी बसी पनि आम्दानी गर्न सक्ने अप्सन दिएको छ।
फेसबुकबाट यसरी कमाउनुहोस पैसा
घरमा खालि यत्तिकै बस्नु भन्दा फेसबुकमा मेहनत गर्नुहोस यसबाट बाट पैसा कमाउन सबै भन्दा पहिले तपाई संग एउटा फेसबुक पेज हुनु पर्ने छ या बनाउन जरुरी छ। त्यस पछि पेजमा दैनिक अपडेट हुनु पर्ने छ। जसले पेज रिच बढाउदछ। पेजमा लाइक हुनु महत्वपूण होइन तर पेजमा प्रयोगकर्ताको इन्गेजमेन्ट कति छ यसै अनुसार पेजको रिच तह हुन्छ।
पेजको रिच पोस्ट गरिएको समाग्री कतिले लाइक, कमेन्ट र सेयर गरे भन्नेमा भर पर्ने हुंदा जति लाइक, कमेन्ट र सेयर बढ्यो सोही अनुसार पेजको रिच बढ्दछ। यदि पेजको रिज राम्रो छ भने तपाईले फेसबुकसंग कन्ट्याक गरि आम्दानी गर्न सक्नु हुनेछ। तपाईले कुनै स्थानिय उत्पादन तथा सेवाको विज्ञापन आफ्नो पेजमा गरिदिन सकिन्छ तर यो प्रयोगकर्ताको मेहनेतमा भर पर्दछ।
यस्का लागी तपाई फेसबुकको एड्भमन्स युजर बन्न जरुरी हुन्छ। जसका लागी तपाईले एक फर्ममा आफ्नो बैंकको अकाउन्ट नम्बर र आफ्नो सही बिबरण भर्नु पर्ने हुन्छ। फर्म भरेको केही समयमा तपाइको अकाउन्ट एक्टिभ हुन्छ।यस पछी फेसबुक प्रयोकर्ताको एक्टिभिटी अनुसार कमाएको पैसा सोही बैंक अकाउन्टमा जम्मा हुन्छ।
यसले व्यावसाहीको लागी समेत नयाँ अप्सन लेराएको छ जसमा फेसबुक पेजमा कल टु एक्सन बटन राखिएको छ। यसले आफ्नो स्मभावित ग्राहकसंग जोडिन र आफ्नो उत्पादन र सेवा प्रति पोत्साहित गर्दछ। ग्राहकले पेजमा रहेका पोस्ट देखेर कम्पनीलाई सम्पर्क गर्ने छन।
यस बाहेक अर्को अप्सन भनेको प्रगोगकर्ताले आफ्नो टाइमलाइनमा भिडियो सेयर गरेर पनि पैसा कामउन सक्दछन । अपलोड भएको भिडियोमा फेसबुकले विज्ञापन देखाउन थाल्दछ र भिडियोको भ्यू अनुसार फेसबुकले पैसा सदने गर्छ तर यसको लागी भिडियो सक्कली अर्थात कपी नगरिएको र आफ्नै उत्पादन हुनु पर्नेछ।
के हो डार्क वेब ? यसको प्रयोग कहाँ र कसरी गरिन्छ ?
स्मार्टफोनको क्वाड क्यामेरा सेटअप के हो ?